Foreigner Shamelessly Ityhila Njani Lula kubalulekile ukuba Hook Phezulu ne-Girls kwi-China
A controversial ividiyo i-i-american umntu lucacisa indlela kulula ukuba hook phezulu kunye Isitshayina girls wafumana ezininzi thabatha reactions ukusuka kwi-intanethi abasebenzisi. Toque, mobile app ukuba sells ngesondo izinto zokudlala, i-intanethi, ekhutshwe a ividiyo apho starred umlungu claiming kuba i-i-american.
Nangona kunjalo, akazange udliwano-ndlebe ngenxa yobomi bakhe ibali, kodwa ngenxa yakhe amava kunye Isitshayina girls waya phezu kwakhe balingwe kwaye tested indlela kwi indlela effortlessly chonga phezulu Isitshayina girls e a bar. Jack, abo wachaza ukuba ingaba hooked phezulu ne-jikelele Isitshayina girls ukusukela yakhe yiya emine edlulileyo, wathi ukuba foreigner kuphela iimfuno ukuba nihlale kunye ulinde girls elizayo.
Ukuba kuvavanya yakhe nengxelo umzekelo i-mbambi-dliwano-ndlebe ke skepticism, Jack waya ngqo kwi intshukumo
Kunye efihlakeleyo ikhamera focused kwi kuye xa wayeneminyaka sat e a café, ividiyo yabonisa ezine Isitshayina abafazi approaching”Jack”, ifumana yakhe uqhagamshelane inani, kwaye nkqu ethabatha imifanekiso kunye naye.
Nangona kunjalo, yintoni waba noticeable ukususela ekuqalekeni waba kufuneka lisebenzise ubuso isigqumathelo kwaye mfiliba ubuso bakhe
Enye into yokuba wema ngaphandle kwaba yakhe hayi-ke-kakhulu i-american accent, apho omnye YouTuber commented ukuba basenokuba a isihungarian accent. Khangela kanjalo Ryan Jikelele mediatrix, Fat-Shaming Loluntu Media Strategist kwi-Persia ngoko nangoko Efumana Kuyivala Phantsi ngo Netizens ividiyo sele ufumene yezigidi izimvo kwaye sele gotten ngoko ke, abaninzi hate izimvo. Ngokunxulumene Shanghaies, abaninzi abahlali bobabini upset yi-enjalo foreigners abakhoyo uthatha ithuba i-dating icandelo lomboniso kwi-China kwaye insulting ividiyo. Olandelayo i-shark yindlela ephambili imvelaphi covering Asian i-american Iindaba kwaye Asian Iindaba kuquka ushishino, inkcubeko, ezolonwabo, politics, tech kwaye ukuzonwabisa. Olandelayo i-shark yindlela ephambili imvelaphi covering Asian i-american Iindaba kwaye Asian Iindaba kuquka ushishino, inkcubeko, ezolonwabo, politics, tech kwaye ukuzonwabisa
← Omtsha Elula Dating App kwi-China Free kwaye Kulula
Apho i-Intanethi Isitshayina Dating Zephondo Umsebenzi elungele Expats →